FITRANDRAHANA VOLAMENA AO MANTALY MARO-BETSIAKA : Mahatsiaro voafitaky ny orinasa Mada Mining ny vahoaka
Mifanohitra amin’izay nambaran’ny iraky ny orinasa Mada Mining nandritra ny valandresaka nataon’izy ireo tamin’ny mpanao gazety tamin’ny taon-dasa iny... 6 janvier 2017
ny zava-misy ao Mantaly Maro sy ny manodidina, Kaominina ambanivohitra Betsiaka, Distrikan’Ambilobe.
Mahatsiaro voafitak’ity orinasa ity ny mponina any an-toerana sy ireo mpitrandraka volamena madinika. « Mikasa hampiasa milina na « engin » entina hangadiana ny kariera misy fatana volamena trandrahanay ny tompon’ andraikitra ao amin’ny orinasa Mada Mining ity. Tsy ekenay izany satria ho potika tanteraka ny kariera fiasan’ny mpitrandraka madinika ary hivadika farihy mihitsy. Tsy vitan’izany hatramin’izao fa tsy hita taratra ny fampanantenana nomen’ny tompon’andraikitra ao amin’ity orinasa Mada Mining ny mponina ny amin’ny fanamboarana fotodrafitrasa maro, tahaka ny sekoly, hôpitaly, sns nefa tsy mitsahatra mampiakatra volamena any Antananarivo izy ireo. Tsy latsaky ny 86 kilao ny volamena efa azon’izy ireo dia izao izy ireo nifindra toeran-kafa izao indray », hoy ny fanazavana nataon’ny mponina ao Mantaly Maro.
Araka ny loharanom-baovao efa any amin’ny faritra misy an’ny Bongon’i Jeck ao Ambilo no misy ireo Sinoa miara-miasa amin’ny orinasa Mada Mining, ankehitriny. Faritra izay malaza fa misy volamena tsy toko tsy forohana. Nefa araka ny fantatra tafiditra anatin’ny faritra arovana karakarain’ny Ong Fanamby ka tsy azo itrandrahana izany toerana izany. Tsara ny manamarika fa midadasika ny faritra arovana karakarain’ity fikambanana tsy miankina amin’ny governemanta ity izay manomboka ao Andavakoera, Kaominina ambanivohitra Anivorana, Distrikan’Antsiranana II, mandalo ao Ambilo Kaominina ambanivohitra Betsiaka ary mifarana any amin’ny Distrikan’i Vohemar. Izany hoe, tsy an’ny orinasa Kraoma velively izany faritra misy ny Bongon’i Jeck . Marihina fa nandritra ny valandresaka nataon’ny iraky ny orinasa Mada Mining tany Antananarivo tamin’ny taon-dasa, izay nahitana olona nitonona ho solontenan’ny mponina nefa tsy marina akory araka ny nambaran’izy ireo fa faritra Mantaly Maro fotsiny no nifanarahany tamin’ny orinasa Kraoma.
Tsy andrenesam-peo ny minisiteran’ny Harena ankibon’ny tany
Manoloana izany toe-javatra izany tsy andrenesam-peo ry zareo eo anivon’ny minisitera tompon’ andraikitra tahaka ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny minisiteran’ny Harena ankibon’ny tany. Mazava amin’ny maro ny antony fa aleo tsy resahana. Niantso an’ny Lehiben’ny Distrikan’Ambilobe kosa izahay omaly mahakasika ny fitrandrahana volamena kasain’ny orinasa Mada Mining hatao ao amin’ny faritra Ambilo ity ka nilaza ity farany fa tsy mbola naheno an’izany fa kosa hanadihady momba izany ny tenany, izay ao anatin’ny tompon’andraikitra voalohany na « noyau dur » manara-maso ny fiarovana ny tontolo iainana any amin’ny tapany avaratry ny Nosy iny.
« Raha mitombona izany tsy maintsy haka fepetra izahay », hoy izy. Marihina fa ny Lehiben’ny Faritra Diana, ny Préfet, ny Lehiben’ny distrika, ireo tompon’andraikitra ao amin’ny sampana misahana ny Harena ankibon’ny tany sy ny Tontolo iainana ary maro hafa no mandrafitra izany tompon’andraikitra voalohany na « noyau dur » izany. Rariny aloha raha tsy fantatr’ireo tompon’andraikira ireo ny ataon’ny orinasa Mada Mining ao amin’ny Kaominina ambanivohitra Betsiaka. Satria tsy miera ary tsy mangataka alalana na amin’iza na amin’iza ireo tompon’andraikitra ao amin’ity orinasa ity fa manao izay tiany hatao sy danin’ny kibony. Manana Jokera matanjaka, hono, ry zalahy ka tsy azo hozongozonina. Vitsy araka izany mba tsy hilazana hoe tsy misy amin’ ireo tompon’andraikitra ara-panjakana any an-toerana no sahy hisakana ny fitrandrahana volamena tsy manara-dalàna ataon’ity orinasa ity. Ho hitantsika eo ihany ny tohiny.
Tsy misy tombontsoa azon’ny Kaominina
« Ny mampalahelo amin’ity raharaha ity dia ny minisitry ny Harena ankibon’ny tany ankehitriny, izay zanak’ity faritra ity indray no ohatran’ny mampirisika ity orinasa ity hanao ampihimamba ny volamena misy ato amin’ny Kaominina Betsiaka. Ny volamena azon’izy ireo dia ahondrana makany Antananarivo ary tsy misy tombontsoa miditra ao amin’ny Kaominina sy Distrika ary ny Faritra misy anay », hoy ny fanazavana nataon’ny mponina ao Betsiaka.
Tsy andrenesam-peo ihany koa ny Ben’ny tanànan’ny Kaominina ambanivohitra Betsiaka satria efa nahazo tapi-maso. Dia gaga isika raha mitady hitroatra ny vahoaka sy ireo mpitrandraka volamena madinika any an-toerana.
Ho an’ny amin’ny faritra Mangily ireo Sinoa
Milaza fa tsy miara-miasa amin’ny Sinoa ireo tompon’andraikitra ao amin’ny orinasa Mada Mining nefa tsy marina izany. Miaraka amin’ity orinasa ity ireo Sinoa tazana ao amin’ny faritra Andrafialava. Araka ny voalazan’ny mponina ao an-toerana efa miomankomana ho any amin’ny faritra antsoina hoe Tanambao Mangily izay ahitana kariera iray antsoina hoe Antagnatagnana ireto Sinoa ireto. Tsiahivina fa ny tale jeneralin’ny orinasa Kraoma aza nilaza tamin’ny mpanao gazety fa misy teratany sinoa sy arabo henon’izy ireo fa miara-miasa amin’ny orinasa Mada Mining.
Avy aiza ary ny alalana ahafahan’ity farany manao an’izany ? Gaboraraka no misy eto amin’ny Firenena ary ohatran’ny tany tsy misy lalàna, ka samy manao izay tiany hatao. Na izany na tsy izany nambaran’ny mponina ao Ambilo efa nampafantarin’izy ireo ny profesora Zafy Albert izay zanaky ny Kaominina Betsiaka ny fanaovan’ny sasany ampihimamba ny volamena any an-toerana.